eHimalaya Online || News from nepal » जब सुटिङका ​​क्रममा नोरा फतेहीको सेटमा सबैका अगाडि कपडा फुस्किएपछि….
जब सुटिङका ​​क्रममा नोरा फतेहीको सेटमा सबैका अगाडि कपडा फुस्किएपछि….
२०७८ पुस २० गते मङ्गलबार ०१:४८
नोरा फतेही बलिउड उद्योगको चर्चित अनुहार बनेकी छिन् । नोरा फतेहीले आफ्नो उत्कृष्ट अभिनय र अदभुत नृत्यका कारण छोटो समयमा नै धेरै चर्चा कमाएकी छिन् । नोरा फतेही हालसम्म धेरै सुपरहिट फिल्ममा देखिएकी छिन् । नोरा फतेही आफ्नो पर्सनल...
नोरा फतेही बलिउड उद्योगको चर्चित अनुहार बनेकी छिन् । नोरा फतेहीले आफ्नो उत्कृष्ट अभिनय र अदभुत नृत्यका कारण छोटो समयमा नै धेरै चर्चा कमाएकी छिन् । नोरा फतेही हालसम्म धेरै सुपरहिट फिल्ममा देखिएकी छिन् । नोरा फतेही आफ्नो पर्सनल र प्रोफेशनल लाइफका कारण सधै चर्चामा रहन्छिन् । यससँगै उनको ड्रेसिङ सेन्स पनि चर्चामा रहन्छ ।
त्यसैगरी आज हामी तपाईलाई एउटा यस्तो किस्सा बताउन गइरहेका छौँ, जब सुटिङका ​​क्रममा नोरा फतेहीको सबै क्रु सदस्यको अघि लुगा फुस्किएको थियो । र यस क्रममा उनलाई धेरै अप्ठ्यारो महसुस गर्नुपरेको थियो। भनिन्छ, नोरा फतेही फिल्मको सुटिङका ​​क्रममा नाच्दै थिइन् र अचानक उनको कपडाले धो,का दियो र उनको सबै क्रु मेम्बरका अगाडि आफ्नो लुगा फुस्किन लाग्दा त्यतिबेला नायिका तमन्ना भाटियाले उनको कपडालाई सम्हालेकी थिइन् ।
यसै क्रममा नोरा फतेहीले एक अन्तर्वार्तामा भनेकी थिइन्, ‘त्यतिबेला तमन्ना भाटिया नभएको भए मेरो इज्जत सबैका अगाडि धमिलो हुने थियो । तमन्ना भाटियालाई धन्यवाद । तर, नोरा फतेही आफ्नो कपडाका कारण उप्स मोमेन्टको शि’कार भएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पनि धेरै पटक यस्तो भएको छ ।
प्रकाशित मिति २०७८ पुस २० गते मङ्गलबार ०१:४८
२०७९ असार १३ गते सोमबार ०३:१५